चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड के हो?
चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड पिघला धातु विशिष्ट चिकित्सा उपकरण उत्पादन गर्न एक विशिष्ट गुहा मा कोरिएको जो मोल्ड को प्रकार छ।
यो प्रक्रिया एफडीए (खाद्य र औषधि प्रशासन) द्वारा अनुमोदित शल्य बर्तन को एक किसिम को उत्पादन गर्न अनुकूलित छ। यो प्रक्रिया प्रयोग सामाग्री जो लाभ को एक किसिम, उच्च-डिग्री उपकरण बनाउन अधिकतम प्रदर्शनी प्लास्टिक छन्।
यो चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया subassemblies वा थप जटिल बर्तन को प्रमुख भागहरु रूपमा या त चिकित्सा भागहरु को एक किसिम बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
इंजेक्शन ढलाई द्वारा निर्मित चिकित्सा पार्ट्स
त्यहाँ पक्कै उच्च गुणस्तरीय चिकित्सा भागहरु छन् जो यो प्रक्रिया मार्फत निर्मित भइरहेका छन् कि मूल्यवान चिकित्सा भागहरु को एक नम्बर हो। तिनीहरूलाई केही तल उल्लेख गरिएका छन्।
Tracheal ट्यूब र धेरै अन्य ट्यूब
स्केलपेल र अन्य विभिन्न ब्लेड
यी भागहरु र धेरै अरूलाई सबै कुशलतापूर्वक चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया बाहिर बनाईएको हो। उत्पादनहरु को सबै उच्च डिग्री प्रदर्शन र गुणस्तर सक्षम छन्।
चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड लागि प्रयोग सामाग्री
यो प्राथमिक थर्माप्लास्टिक किनभने यसको धेरै लाभदायक विशेषताहरु को चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मा प्रयोग भइरहेको छ।
यो चिकित्सा ग्रेड को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधा यो अधिकतम चिकित्सा उद्योग मा यसको प्रयोग बनाउँछ जो अत्यधिक थर्मल लचीला छ भन्ने छ।
यसबाहेक, polycarbonate उच्च तन्यता र अपरूपण बल छ। यो थर्माप्लास्टिक अर्को सुविधा यसलाई चिकित्सा ग्रेड अवशोषित कम चिस्यान छ भन्ने छ।
प्लास्टिक भन्दा अन्य, चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड प्रक्रिया मार्फत चिकित्सा उपकरणहरू निर्माण गर्न प्रयोग भइरहेका छन् जो अन्य सामाग्री को एक किसिम छन्। निम्न ती सामाग्री को सारांश छ।
रेशा चिकित्सा उपकरणहरू को निर्माण को लागि विदेशी सुविधाहरू अधिकतम धेरै छ। यसलाई चिकित्सा उपकरणहरूमा हडताली इन्सुलेशन प्रदान गर्दछ।
कार्बन फाइबर स्तरवृद्धि लाभ यसलाई एल्यूमीनियम वा इस्पात भन्दा उपयुक्त छ किनभने जो धेरै छ। कार्बन फाइबर प्रमुख लाभ कि अत्यधिक जंग र रासायनिक लचीला छ।
यसबाहेक, this material hasahigh level of strength and arduousness which makes it optimum to use in the medical plastic injection mold process. Another supreme benefit of the carbon fiber is that it is extremely lightweight.
को पिघला प्लास्टिक अनावश्यक कुना र किनारा गठन, तसर्थ, मोल्ड गुहा को विभिन्न च्यानलहरू मा हुन्छ। एक ट्रिम मिसिन प्रयोग गरेर यी खराब सीमाहरु एक सूक्ष्मता समाप्त उत्पादन दिने काटेर छन्।
ठंडा भाग मोल्ड गुहा बाहिर निकालेको छ एक पटक, यो क्रम एक सूक्ष्मता समाप्त चिकित्सा भाग वा अंश प्राप्त गर्न धेरै अन्य प्रक्रियाहरू गर्न subjected छ।
धेरै भागहरु अर्डर एक चिकित्सा घटक प्राप्त गर्न सँगै संयुक्त छन्। यो प्रक्रिया एक मिसिन वा स्वयं मद्दत संग गर्न सकिन्छ।
यो प्रक्रिया दुई चिकित्सा भागहरु र घटक बीच पकड राख्न आवश्यक छ। धेरै अल्ट्रासोनिक छालहरू को भागहरु बीच एक चिरकालीन सम्बन्ध गाँस्न प्रयोग गरिन्छ।
जटिल आकृतिहरू निर्माण गर्न सक्छन्
हरेक शल्य मोड्युल अन्य फरक छ। यसरी तिनीहरूले आकारहरू र आकार मा भिन्नता छ। जबकि अन्य निर्माण गर्न सरल हुन सक्छ केही जटिल ज्यामिति समावेश हुन सक्छ।
कुनै कुरा जो आकार को शल्य चिकित्सा मोड्युल छ, चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड प्रक्रिया जटिल र जटिल आकारहरू को सबै प्रकार उत्पादन गर्छ।
यसबाहेक, यस्तो जटिल मोड्युलहरू को निर्माण को लागि समय अरूको कि जस्तै हो। तसर्थ, चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड अन्य विनिर्माण विधिहरू भन्दा उपयुक्त छ।
आफूलाई सानो सम्झने श्रम खर्च
चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग स्वतः मिसिन द्वारा गरिन्छ जो प्रक्रिया नियन्त्रित छ।
कम कामदारहरू चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग को मशीनरी सम्हाल्न र काम प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
पलिश SURFACING उत्पादन बाहिर-वर्ग र ग्रेड ए चमकाने यो पहिले देखि नै छ भन्दा सहज सामाग्री को सतह बनाउन गरेको छ हेर्न बनाउन आवश्यक छ।
त्यहाँ धेरै उपकरण सतह परिष्करण लागि प्रयोग सामाग्री गर्दै छन्। तथापि, तपाईं परिष्करण उच्च पुग्न, यो लागि लागत पनि बढी छ।
तर, चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड यसलाई सहज बनाउन र प्रयोग गर्न बेहतर चिकित्सा उपकरण गर्न एक असाधारण र असाधारण परिष्करण दिन्छ।
यसबाहेक, चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड प्रयोग सामाग्री अत्यधिक जंग र जो पनि चिकित्सा उपकरणहरू र मोड्युलहरू असल परिष्करण र चमकाने योगदान लचीला खुर छन्।
चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड गर्न सीमितता
हरेक लाभदायक कुरा जो उपेक्षा गर्न सकिँदैन पनि केही drawback छ। त्यसै गरी, चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड foreseen गर्नुपर्ने केही सीमा छ।
यो चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड को प्रमुख बेफाइदा छ। यस प्रक्रिया बाट निर्मित भइरहेको उत्पादन धेरै डिजाइन सीमितता र प्रतिबन्धको छन्।
यसबाहेक, उत्पादन को डिजाइन यो प्रक्रियाको सूत्रपात अघि निर्णय गर्नुपर्छ।
यो मात्र उत्पादन निर्माण को लागि लागत छैन बढाउन सक्छ तर पनि यो तपाईं डिजाइन प्रतिबन्ध शिकार बनाउन सक्छ।
यसबाहेक, यो उत्पादन को निर्माण को लागि समय बढाउन सक्छ।
चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड मिसिन नियन्त्रण गर्ने कम्प्युटर द्वारा मुख्यतया गरेको छ।
मशीनरी स्वतः नियन्त्रित छ र कम कामदारहरूको उत्पादन निर्माण गर्न आवश्यक छ।
तथापि, जहाँ यसलाई कम श्रम खर्च लागि फाइदाको हुन सक्छ, यो पनि बेरोजगारी को वृद्धि दर को एक शक्तिशाली स्रोत हुन सक्छ। यो चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रियाको फिर्ता नेतृत्व एक प्रमुख हुन सक्छ।
पातलो-पर्खालहरु मोड्युलहरू प्रतिबन्धित
चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड मात्र पातलो-पर्खालले घेरिएको चिकित्सा घटक को निर्माण को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बाक्लो-पर्खालहरु मोड्युलहरू बनाउन ठंडा प्रक्रिया जो, बारी मा, मशीनरी को लागत बढ्छ लागि समय वृद्धि हुनेछ।
यसबाहेक, बाक्लो-पर्खालले घेरिएको चिकित्सा उपकरणहरूमा पातलो-पर्खालले घेरिएको भागहरु द्वारा प्रदर्शन जस्तै गुणस्तर शामिल सक्छ।
तसर्थ, चिकित्सा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया मात्र पातलो-पर्खालले घेरिएको high- गुणस्तर चिकित्सा घटक र उपकरणहरू निर्माण सीमित हुन सक्छ।